Olee otú Iji ndabere Android Devices ma wepụ Files Site ndabere na ala?
Olee otú ndabere Android Devices ma wepụ faịlụ site ndabere na ala?
Ọtụtụ a ụfọdụ, o nwere otú ime ka ị nwere ike hapụ data mmadụ na mberede. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ọ bụ ọnụnọ nke a ndabere fie nke nwere ike inyere gị aka weghachi gị furu efu data na oge. Mgbe ị jiri android ndabere njikwa, ị nwere ike ịbịara ole na ole ihe isi ike n'ihi na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ bụghị ogugu. Site na nke a mgbochi, ị nwere ike kpọmkwem weghachi ndabere faịlụ. Otú ọ dị, ọ bụghị agaghị ekwe omume. Na smart ojiji nke software, ị nwere ike mfe ndabere gị android ngwaọrụ site adịrị nkwado ndabere na mpaghara format na weghachite ọdịnaya mfe kwa.
Ndabere na Android ndabere Manager
Android ndabere Manager bụ ngwá ọrụ nke na-eji n'ihi adịrị backups ma dum usoro bụ nnọọ mgbagwoju. Nkwado ndabere na mpaghara faịlụ kwesịrị ka a kere iji ADB iwu. Mgbe nkwado ndabere na mpaghara faịlụ abịakọrọ, na mkpakọ a ga-eme iji zlib mkpakọ n'ọbá akwụkwọ. Mgbe a paswọọdụ banyere n'oge mkpakọ usoro, ọ ga-eduga ezoro ezo na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ.
Iji ike backups na ngwaọrụ gị, mkpa ka i nwere ihe android 4.0+ version. Nke mbụ niile, i kwesịrị inwe ike USB debugging mode. Mkpa ka ị ịlele android pụta ìhè XML faịlụ na ị nwere ka android: allowback Nyenụ eziokwu.
E nwere usoro nke nzọụkwụ nke kwesịrị ka a rụrụ dị ka ị ga-abanye iwu.
Gaa na android data ndabere shei na-agba ọsọ ahụ iwu 'pm ndepụta nchịkọta'. Nke a ga-enyere gị aka inwe ihe zuru ezu ndepụta nke nchịkọta nke na-arụnyere na ngwaọrụ gị.
E nwere kpọmkwem iwu n'ihi akwado faịlụ. N'ihi na akwado Whatsapp data, i nwere ike iji na-esonụ iwu.
ADB ndabere -f com.whatsapp.ab -noapk com. Whatsapp
Ị ga-enweta a ozugbo ebe mkpa ka ị pịa 'ndabere m data
Nke a bụ ụzọ ịmepụta ndabere. Ọ bụrụ na ọ na-ama anya na-ukwuu hassle, ị gaghị enwe obi ụtọ ịmara na usoro nke adịrị na Iweghachi nkwado ndabere na mpaghara bụ ọbụna ihe mgbagwoju.
Adịrị nkwado ndabere na mpaghara
Nke mbụ niile, nkwado ndabere na mpaghara faịlụ kwesịrị ka a converted n'ime a taa Archive site-agba ha 24 byte nkụnye eji isi mee.
Mgbe nkụnye eji isi mee e gbukpọọla, na raw zlib data mgbe ahụ kwesịrị na top ga-decompressed iji openss1
E nwere ọtụtụ ndị dị iche iche iwu nke kwesịrị ka a banyere na gwụla ma, i nwere a nke ọma nzuzo ihe ọmụma, ọ bụ maa bụghị ndị kacha nzọụkwụ ịrụ.
N'ozuzu, dum usoro anya na-a otutu mgbagwoju na bụ nke a mere ọtụtụ ndị na-ezere iji android data manịja ma na-eme ma ọ bụ na-eweghachiri backups. Anyị ga-ekwu nke ọzọ ụzọ nke bụ a otutu mfe na ọtụtụ quicker na sans niile oru nsogbu dị ka mma.
Nkwado ndabere na mpaghara weghachite na otu click
Wondershare MobileTrans Bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na irè software nke ike-eji n'ihi akwado ọdịnaya na iweghachi ya mfe kwa.
Nkwado ndabere na mpaghara weghachite Android ngwaọrụ na ONE click!
1-pịa nkwado ndabere na mpaghara kọntaktị, SMS, ngwa, audio, video, photos, oku na ndekọ, kalenda.
Selectively ndabere SMS, video, ngwa, kọntaktị, music, photos, akwụkwọ faịlụ.
Weghachi gị Android si ndabere faịlụ enweghị ihe ọ bụla hassle.
Nyefee data n'etiti Android na iOS kpam kpam.
Arụ ọrụ nke ọma na HTC, Samsung, Sony, LG, Motorola, Huawei, ZTE, Google.
N'ihi atụmatụ ndị a, ọ bụ maa otu n'ime ihe ka mma nhọrọ n'etiti ọrụ. Ka anyị a lee anya na nzọụkwụ na-eso maka Ichekwa ndabere na Iweghachi Android data.
Olee otú ndabere Data na Wondershare MobileTrans?
Iji ndabere ọdịnaya na ekwentị gị, na-eso ndị nzọụkwụ.
Download na ẹkedori Mobile Trans na PC gị.
Jikọọ ekwentị gị na PC gị.
Ke ufọk ihuenyo nke ngwa, pịa 'Back Up ekwentị gị' dị ka ọ ga-emeghe nkwado ndabere na mpaghara panel.
Ị ga-ahụ a ndepụta n'ikwu niile ọdịnaya nke ị chọrọ ka ndabere.
Ego ndị ọdịnaya nke ị chọrọ ndabere na mgbe ahụ kụrụ on 'Malite Copy'.
Mobile Trans ga-amalite na-edegharị ihe faịlụ ndị ahọrọ gị na kọmputa.
Olee otú iji weghachi ndabere?
Mgbe i mere ka a ndabere, i nwere ike iji ya n'oge ọ bụla n'ihi nke iweghachi gị faịlụ na-ewepụta ha azụ na ekwentị gị.
Ẹkedori Mobile Trans ngwa na gị na PC na jikọọ ekwentị gị na iji eriri USB.
Gaa n'ụlọ menu na emek 'Weghachi si Backups' nhọrọ.
Ị ga-ahụ a dropdown ndepụta nke ga na-enye dị iche iche ndabere formats Ị nwere ike ịtụtụrụ si.
Họrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ nke ịchọrọ ị weghachi.
Pịa na 'Malite Copy'.
The faịlụ ga-agafere ekwentị gị site na PC.
Soro ndị a nzọụkwụ na ị ga-enwe ike iweghachi gị ndabere faịlụ na oge.
20 Google Ugbu a Atụmatụ na usoro maka Ị
Ibufee ọdịnaya site na Android ka HTC, na site na HTC ka Android Mfe
> Resource> Android> Olee otú ndabere Android Devices ma wepụ faịlụ site ndabere na ala?